Andriamanitra maneho ny maha-Izy Azy tenany amin’ny mino – FJKM Ambavahadimitafo Andriamanitra maneho ny maha-Izy Azy tenany amin’ny mino |
Andriamanitra maneho ny maha-Izy Azy tenany amin’ny mino
Publié le 18 avril 2021 à 09:04
Alahady 18 aprily 2021, alahady faharoa manaraka ny paska, hibanjinana ny lohahevitra hoe « Mampiorina ny mino ny fanavotan’i Kristy ».
Ny perikopa nangalana ny hafatr’Andriamanitra dia avy ao amin’ny Isaia 48 : 11-22 : « 11Noho ny tenako, eny, noho ny tenako ihany no anaovako izany; Indrisy, lotoina ny anarako! Ary ny voninahitro tsy homeko ny hafa. 12Mihainoa Ahy, ry Jakoba, Sy ry Isiraely izay nantsoiko : Tsy miova Aho; Izaho no voalohany, ary Izaho koa no farany. 13Eny, ny tànako no nanorina ny fanambanin’ny tany, Ary ny tànako ankavanana no namelatra ny lanitra; Raha antsoiko ireo, dia indray miseho avokoa. 14Mivoria hianareo rehetra, ka mihainoa : Iza moa amin’ireny no mba efa nanambara izany; Ilay tian’i Jehovah no hahefa ny sitrapony amin’i Babylona, Ary ny sandriny ho amin’ny Kaldeana. 15Izaho dia Izaho ihany no miteny sady miantso azy, Nitondra azy Aho, ka hambinina ny làlany. 16Manatòna Ahy hianareo, ka mihainoa; Hatramin’ny taloha no efa tsy nitenenako tamin’ny mangingina, Hatry ny fony vao nisian’ireo dia teo Aho, Ary ankehitriny Jehovah Tompo no naniraka Ahy sy ny Fanahiny. 17Izao no lazain’i Jehovah, Mpanavotra anao, Dia ny Iray Masin’ny Isiraely : Izaho, Jehovah Andriamanitrao, No nampianatra anao hahita soa Sady mitarika anao amin’ny làlana tokony halehanao. 18Toy izay anie hianao mba nihaino ny didiko! Dia ho tonga tahaka ny ony ny fiadananao, Ary ho tahaka ny onjan-drano-masina ny fahamarinanao, 19Ary ho tahaka ny fasika ny taranakao, Ary ny aloaky ny kibonao ho tahaka ny sombim-pasika; Ny anarany tsy ho tapaka na ho foana eo anatrehako. 20Mivoaha hiala any Babylona; Miezaha avy any amin’ny Kaldeana; Torio amin’ny feo mahafaly, Ary ambarao, ka aelezo hatrany amin’ny faran’ny tany, Lazao hoe : Jehovah efa nanavotra an’i Jakoba mpanompony. 21Ary tsy nangetaheta ireo tamin’ny nitondrany azy tany an-efitra; Nampiboiboika rano ho azy avy tamin’ny vatolampy Izy, Eny, nampitresaka ny vatolampy Izy, ka dia nigororoana ny rano. 22Tsy misy fiadanana ho an’ny ratsy fanahy, hoy Jehovah. «